I-Green Ground ikhofi yokulahlekelwa kwesisindo
Abesifazane abaningi banenkinga enkulu. Imiphumela emihle kakhulu inikeza ukusetshenziswa kwekhofi yemvelo eluhlaza. Ososayensi bahlolisisa lo mkhiqizo futhi baphetha ngokuthi empeleni kunomthelela ekulahlekeni kwesisindo. Ngaphezu kwalokho, ayiqukethe izithasiselo, okusho ukuthi akulimazi umzimba. Phuza lokhu kuphuza uma nje ufuna. Ngisho nokusetshenziswa kwayo isikhathi eside akuthinti impilo yakho. Kumele kuqashelwe ukuthi lo mkhiqizo unezinto eziyingqayizivele ekubunjweni kwawo.
Indlela ikhofi ewusiza ngayo ekulwa nokukhuluphala
Ikhofi eluhlaza ikhiqizwa kusuka e-arabic eluhlaza. Ngenxa yokuthi lesi siphuzo siqukethe inani elikhulu lama-antioxidants, ukusetshenziswa kwalo kusiza ekulahlekeni kwesisindo. Ama-Antioxidants anamandla okwenza ama-fat cells, uwahlukanisa. Uma uqhathanisa isando esidala esineziphuzo kanye nekhofi eluhlaza ukuthi yiziphi zazo ezisiza ukulahlekelwa isisindo, impendulo izobonakala - ikhofi eluhlaza iyasebenza kakhulu ekulwa namakhilogremu angaphezulu. Iyakwazi ukwehlukanisa ama-fat angu-45%, kanti i-cuff yakudala ayihlukanisi ngaphezu kuka-14%. Ikhofi eluhlaza futhi ibonisa ama-radicals mahhala wezinhlaka.
Ikhofi eluhlaza iqukethe inani elikhulu le-chlorogenic noma i-caffeic acid. Yilokho okusiza ukunciphisa izitolo ezinamafutha emzimbeni. Kumele kuqashelwe ukuthi le asidi eguqula amafutha ibeka amandla. Ngakho-ke, ukufeza umphumela wokuzuza isisindo, ukuphela ikhofi eluhlaza kuphela okwanele. Kubalulekile ukuthola ukusetshenziswa kwamandla, okungukuthi, ukwenza umzimba wokuzivocavoca. Khona-ke ama-kg kilogram angeke ahambe. Ikhofi eluhlaza ayisebenzisi nje kuphela ukulahlekelwa isisindo, kodwa futhi nokuthuthukisa yonke imvelo. Ngokwesibonelo, i-chlorogenic acid, ephikisana ne-antioxidant, iyasiza ukunciphisa ushukela wegazi. Ngakho-ke, ikhofi eluhlaza yinconywa kakhulu kulabo abanesifo sikashukela.
Akuyona imfihlo ukuthi uma ama-kilogram ehamba, isikhumba silenga. Uma ulahlekelwa isisindo ngenkathi udla ikhofi eluhlaza, lokhu akukwenzeki. Ngokwesayensi kutholakale ukuthi isikhumba salabo abalahlekelwe isisindo ngosizo lwekhofi eluhlaza, isikhumba asizange nje sibe nesibindi, kodwa futhi sathola ukubonakala okunamandla okuqhubekayo. I-Greencake iyatholakala ezinhlokweni ezimbili: othosiwe futhi ongabisiwe.
Ukufeza umphumela omkhulu, kufanele uphuze ikhofi eluhlaza nsuku zonke. Ikhofi elihlaza lenza ngcono umzimba, ngakho-ke inqubo yokushisa amafutha ahamba ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwekhofi lugcwele inani elikhulu lamavithamini namaminerali.
Lesi siphuzo sinconywa kulabo ababhekene nokucindezelwa kwegazi eliphezulu. Ngokusetshenziswa okuluhlaza okwesibhakabhaka, ingozi yezifo ezihambisana nesimiso senhliziyo ixoxwa. Ukwakhiwa kwaleli khofi kuhlanganisa into esiza ukuhlanzwa kwemithambo yegazi kusuka e-cholesterol plaques, izinga le-cholesterol livamile, okusho ukuthi ingozi yokushaya izifo kanye nezifo ezifanayo ziyancipha.
Ngenxa yezifundo eziningi, ososayensi bafinyelela esiphethweni sokuthi labo abaphuza ikhofi eluhlaza, bancishise ukudla, okusho ukuthi kubalulekile ekulwa namakhilogremu angaphezulu.
Ukusetshenziswa njalo kwalesi siphuzo kuthuthukisa umsebenzi wengqondo, ngakho-ke kuyasiza kulabo abafundayo, isibonelo, kubafundi. Ngaphezu kwalokho, izinto eziqukethwe ikhofi zisiza ukuhlanza isibindi sezinto eziyingozi, i-toxins, i-cholesterol nezinye izinto eziyingozi. Le khofi iqukethe into efana ne-caffeine, ngakho ikhofi ibizwa ngokuthi isiphuzo esiqabulayo, ngokuvamile sidakwe ekuseni ukuze sijabule. I-caffeine iyasiza ukwandisa amandla omzimba, ikhofi yokuphuza, umuntu uthola i-vivacity usuku lonke.
Uma uphuza ikhofi eluhlaza inyanga, khona-ke ungahlukanisa ngamakhilogremu amabili noma amathathu. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi umuntu akufanele athembele kuphela ekusebenzeni kwekhofi. Kudingeka udle kahle, kodwa akudingeki udle kakhulu futhi kuyoba usizo ukukhipha ukudla okuphezulu kakhulu khalori kusuka ekudleni.
Ikhofi kufanele idakwe emini, kodwa hhayi ngaphezu kwezinkomishi ezintathu. Sebenzisa kangcono ngaphambi kokudla, ngoba kunciphisa ukudla, ngakho-ke isabelo lapho umzimba uzogcwala khona, uzokwehlisa. Kumele kukhunjulwe ukuthi ikhofi kuyisiphuzo esiphuthumayo futhi kungcono ukungaphuzi kusihlwa, kungenjalo umuntu angalala. Kumele kuqashelwe ukuthi udinga ukuphuza ikhofi eluhlaza ngaphandle kokwengeza noma yini, ngaphandle kwalokho ngeke kube nomthelela. Ekuseni, kunconywa ukuba uphuze ikhofi ngokusho kwepulani elilandelayo: kwasekuseni kwasekuseni, futhi emva kwemizuzu engaba ngu-45 inkomishi yekhofi, khona-ke umzimba uzothola imali esiphezulu yamandla.
Ungaphuzi ikhofi eluhlaza ngamaswidi noma amanye amaswidi, ngoba ayenamafutha kakhulu. Uma uthanda ngempela ukuphuza isiphuzo elimnandi, ungafaka uju.
Ikhofi eluhlaza ingasetshenziswa cishe konke, ngaphandle kwalabo ababhekene nokucindezeleka komfutho wegazi ophezulu.
Lokhu, mhlawumbe, kungenye yeziphuzo eziwusizo kakhulu futhi ezisebenzayo ezisiza ukuqeda isisindo esiningi.
Ukuphulukisa izindawo zezintaba zezintaba
Ubisi lwezinyosi: izakhiwo eziwusizo
Love horoscope ngenyanga kaMashi
Ama-cookie amakhukhi ku-margarine
Isitshalo semifino nesitshalo seqanda
Inja nengane encane
Amathiphu okudla okunempilo nokuphilile kusuka kuSharon Stone
I-Cocktail "i-Tai Tai"
Kungani izimpumputhe ezithule futhi ezimpunga zikhululekile kakhulu ngokuphila kwazo?
Izipho zangempela zentombazane
Izindlela ezingezona zendabuko zokwelashwa kwe-lymphostasis